Maraoka: Indro tonga ny Masoandro · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Novambra 2009 6:52 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Français, Español, বাংলা, 简体中文, 繁體中文, English
Nambaran'i Maraoka tamin'ity herinandro ity ny fanombohan'ny tetikasa angovo azo avy amin'ny masoandro, mitentina hatramin'ny 9 lavitrisa $, hampiakarana ny tahan'ny angovo azo havaozina amin'ny famokarana angovo eo amin'ny firenena. Ireo mpitoraka blaogy mankasitraka azy io no tena maro mizàra ny eritreriny.
Mahita ny mazava aho, avy amin'i si David ao amin'ny Flickr
Ny vinavina, nambara ampahibemaso tany amin'ny tanànan'i Ouarzazate, andrefan'i Maraoka, nandritry ny lanonana natrehan'ny mpanjaka Mohammed VI sy ny Sekreteram-panjakana Amerikana Hillary Clinton dia, araka ny nolazain'ireo masoivohom-baovao ao an-toerana, hahafahan'ny firenena mizara amin'ny fomba mitovy ny famokarana ireo angovo azo havaozina ao Maraoka azo avy amin'ny masoandro, ny rivotra ary ny tohodrano amin'ny taona 2020. Amin'izay fotoana izay, ireo angovo azo havaozina dia hanome ny 38% -n'ny famokarana angovo eo amin'ny firenena, raha ny voalazan'ny loharanom-baovao.
Taha Balafrej, mitoraka blaogy ao amin'ny Vue du Maroc [Fr], dia manazava fa mety hisy fototra sy ainga vao ara-toekarena ho an'ny fironana politika vaovaon'ny firenena. Manoratra izy:
Misy fahalinana misonga eny anivon'ny mpandraharaha. Ary tsapan'ny rehetra fa manana anjara ao anatin'io ny “tandindon'i Obama”, miaraka amin'ny vintana ara-toekarena napoitrany. Ho an'ny firenena toa an'i Maraoka, izay miankina betsaka amin'ny fanafàrana raha ny resaka angovo, ary ireo loharanony efa miharìtra, dia tombontsoa tanteraka ny fanarahan-dia ireo firenena izay mino sy mampiasa vola amin'ny angovo madio.
Ny tetikasa masoandro, izay sady mahazo famatsiam-bola avy amin'ny tsy miankina sy ny fanjakana, dia hahazo tombony avy amin'ny haitao Amerikana momba ny masoandro sy ny ‘termika’, izay toa misovoka ny tsenan'ireo mpandraharaha nentim-paharazana – ny Frantsay no lohalaharana – zavatra izay tena nankasitrahan'i thestrategist, mitoraka blaogy ao amin'ny Genesis Morocco tokoa :
Tena ivelan'ny vala ny Eraopeana tamin'ity indray mitoraka ity. Tsara kendry [ ho an'ireo mpandraharaha Amerikana]. Momba tanteraka azy ity aho, ry zareo Eraopena tsy mbola afaka hilahatra mihitsy amin'ny fahaiza-mifehin-dry zareo Amerikana raha resaka fitantanana asa goavana…
thestrategist, namoaka taratasy misokatra ho an'ny mpanjaka Maraokana, avy eo manazava [Fr] ny antom-panohanany. Hoy izy manoratra:
[Ity haitao ity dia mety] hanafaka antsika amin'ny fiankinan-doha amin'ny fiavin'ny orana, amin'ny alàlan'ny fampiasàna angovo azo havaozina tsy manam-petra […], mba hanalàna ny sira amin'ny ranomasina sy hamatsiana, ankoatry ny filàn'ny indostria sy ny isan-tokantrano, ny tambajotram-pirenena tsara petraka ho solon'ny tetikasa fananganana tohodrano…
Raha ny ankamaroan'ny mpitoraka blaogy no manohana ilay vinavina, tsy ny rehetra kosa no resy làhatra. Jebli, mitondra fanamarihana [Fr] ao amina hafatra iray nivoaka tamina gazety mpiseho amin'ny aterineto, Hesspress [Ar], dia mahita fa toa lafo loatra ilay tian-katongàvana. Manoratra izy:
Ity tetikasa masoandro ity dia hamokatra 2000 Mega Watt / ora, amin'ny vidiny 9 lavitrisa $, izay TENA lafobe tokoa. Ny fanangànana foibe nokleary iray dia andaniana eo amin'ny 1.5 lavitrisa dolara eo ary mamokatra 1000 Megawatt / ora. Raha 9 lavitrisa dolara, afaka manana foibe nokleary 6 sy hamokatra 6000 Megawatt / ora i Maraoka. Mba marina e, tsy takatry ny lohako ny safidin'ireo mpitondra antsika. Mifidifidy haitao fahatàny ry zareo, tsy mandanjalanja tsara. Tena mandanilany foana ny volam-bahoaka mihitsy ry zareo .
Mitondra fanamarihana amin'io lahatsoratra io ihany, i Hay Bin Yaqdanin [Ar], ao anatin'ilay tetikasa dia mahita fitsabahan'ny tànan'ny hery vahiny amin'ireo loharanon-karem-pirenena . Hoy izy manoratra:
Iriko mba tsy ho tena tsy miankina tanteraka ity tetikasa ity, mba tsy hitrosonantsika any amin'ny ampihimamban'ireo fikambanana vaventy “corporations” ( frantsay ny ankamaroany). Fa nahoana no niandry ny fitsidihan'i Clinton ny mpanjaka? Raha ny fomba fijeriko an'ity tetikasa ity dia fitaovana izy io hanamafisana ny vahohon'ireo firenena efa mivoatra be, toa an'i Amerika
01 Febroary 2020Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
27 Jolay 2019Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
18 Novambra 2011, 17:40
Hiresaka koa -> kochikayen